10-ka ugu sareeya mobilada oo leh waxqabadka ugu fiican xilligan | Androidsis
Sida caadiga ah, AnTuTu badanaa waxay sameysaa warbixin bille ah ama, halkii, liistada boosteejooyinka ugu awooda badan suuqa, bilba bil. Sidaa darteed, fursadan cusub waxaan ku tusaynaa ixtiraamka bisha Diseembar ee sanadkii hore, oo ah tii ugu dambeysay ee iftiiminta jaangooyada. Aan aragno!
1 Kuwani waa taleefannada gacanta ee ugu waxqabadka wanaagsan bisha Janaayo
Kuwani waa taleefannada gacanta ee ugu waxqabadka wanaagsan bisha Janaayo
Liiskan ayaa dhowaan shaaca laga qaaday oo, sida aan iftiiminno, waxaa iska leh bishii Diseembar ee la soo dhaafay, taas oo ah sababta AnTuTu ay u rogi karto arrintaan qiimeynta soo socota ee bishaan, taas oo aan arki doonno Febraayo. Waa kuwan kuwa casriga ah ee ugu awoodda badan maanta, sida ku xusan barxadda tijaabada:
Maaddaama lagu faahfaahin karo liiska aan kor ku soo lifaaqnay, el cusub Xiaomi Mi 11 y Huawei Mate 40 Pro + waa labada bahal ee ku kala yaal labada boos ee hore, oo leh 708.425 iyo 702.819 dhibcood, siday u kala horreeyaan, iyo faraq aan tiro badnayn oo u dhexeeya iyaga. Si xushmad leh, taleefannada casriga ahi waxay leeyihiin barnaamijyo moobil ah Snapdragon 888 iyo Kirin 9000.
Kaalinta saddexaad, afraad iyo shanaad waxa fadhiya Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra iyo Redmi K30S Ultra, oo leh 686.408, 667.006 iyo 666.490 dhibcood, siday u kala horreeyaan, sidaasna ku xidhay shantii meelood ee ugu horreysay liiska AnTuTu.
Ugu dambeyn, qeybta labaad ee miiska wuxuu ka kooban yahay iQOO 5 (665.604), iQOO 5 Pro (664.998), Vivo X50 Pro + (663.383), Huawei Mate 40 (654.325) iyo iQOO Neo 3 (648.012), ee isku amar, lixaad ilaa tobnaad meel.
Si ka duwan liiskii ugu horreeyay ee horey loo sharraxay, oo ay ku badan yihiin Qualcomm iyo Huawei chipsets, liiska 10-ka mobilada dhexe ee maanta ugu sarreeya oo leh waxqabadka ugu wanaagsan bishii Diseembar 2020 ee AnTuTu sidoo kale waxay leedahay taleefannada casriga ah oo leh processor-ka MediaTek. Samsung's Exynos, sidii daabacadihii la soo dhaafay, meelna laguma arko markan.
Ka dib markii Redmi 10X 5G, oo ku guuleystey inuu calaamadeeyo tiro sare oo ah 400.742 oo ay ku shaqeyneyso Mediatek Dimensity 820, Huawei Nova 7 Pro, oo ay ku shaqeyso Kirin 985, ayaa la dhigey booska labaad, iyadoo leh 399.883. Tan waxaa ku xigta Huawei Nova 7, oo leh dhibco dhan 398.308. Kan dambe wuxuu kaloo la shaqeeyaa Kirin 985. Halkan waa in la ogaadaa taas tan ugu sareysa 3 waxaa hogaaminaya mobiil isku mid ah labadii daabac ee hore.
Telefoonada Redmi 10X Pro 5G, Honor 30 iyo Honor X10 ayaa helay boosaska afraad, shanaad iyo lixaad, siday u kala horreeyaan, oo tirooyinkoodu yihiin 398.212, 390.184 iyo 362.974. Huawei Nova 7 SE ayaa ku jira booska toddobaad, oo leh sumad dhan 355.787 dhibcood.
Redmi Note 9 Pro 5G iyo Oppo Reno5 5G waxay ku jiraan booska sideedaad iyo sagaalaad, oo leh 348.343 iyo 348.303, siday u kala horreeyaan. Kan hore waa taleefan kale oo casri ah oo ku qalabeysan Snapdragon cusub ee cusub ee 750G, halka kan dambe lagu bilaabay Snapdragon 765G. Realme Q2 Pro 5G, oo leh Dimensity 800U iyo qodobka aan la tixgelin karin ee ah 338.215 dhibcood ee laga helay barxada tijaabada, waa taleefankii ugu dambeeyay uguna dambeeyay ee ku jira liiska Mediatek's Dimensity 800U chipset.
Noocyada kaladuwan ee Chipset-ka ee aan ka helno liiskan ayaa iska cad. Waxaa jira shan qof oo jooga, Mediatek waa midka maamusha inuu la joogo meesha ugu horeysa ee miiska, taasoo u oggolaaneysa Kirin-ka sharafta leh ee Huawei, oo leh shan fagaarayaal la deggan yahay, iyo dalool yar Qualcomm, oo si dirqi ah ugu guuleysatay inay gasho darajadan. Weli waa la arki doonaa sida Qualcomm uu u soo ceshado sanduuqyada qeybtaan, oo xoogaa looga qaaday qiimeyntii u dambeysay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » 10ka ugu sareeya moobiillada ugu waxqabadka fiican xilligan
Redmi 7A wuxuu bilaabay inuu helo cusbooneysiinta MIUI 12